မီတာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် Vanch UHF RFID ဖြေရှင်းချက်
တပ်ဆင်ထားသည့်လျှပ်စစ်မီတာကိုစစ်ဆေးရန် / အတည်ပြုရန် Vanch UHF RFID လက်ကိုင်ဖတ်စက်ကိုအသုံးပြုပါ. အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်မှာလျှပ်စစ်မီတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော UHF RFID tag ကို UHF RFID လက်ကိုင်စာဖတ်သူအားစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်, စစ်ဆေးမှု / စစ်ဆေးခြင်း၏အချက်အလက်များအားလျှပ်စစ်မီတာ၏ UHF RFID tag သို့ရိုက်ထည့်ပါ, ကြိုးမဲ့ data ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် back-end ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူဒေတာဖလှယ် (ဝိုင်ဖိုင်သို့မဟုတ် GPRS),…
အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Vanch UHF RFID ဖြေရှင်းချက်
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိမြို့ကြီးများစွာ၌, ၎င်းတို့သည် UHF RFID ကိုအမှိုက်သံဗူးများတွင်ထည့်သွင်းရန်မြူနီစီပယ်များကဒေသခံများ၏အမှိုက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကြိုးစားနေသည်. အမှိုက်သရိုက်များစုဆောင်းခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်, RFID သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမှိုက်များကိုစုဆောင်းပြီးအတည်ပြုဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်. ဤအချက်အလက်အပြင်ထရပ်ကားအသုံးပြုမှုနှင့်လမ်းကြောင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်. The process can…